KASHIFAAD: Masar oo hal arrin ku fashilantay kaddibna hanjabaad is muujin ah ku dhaqaaqday! | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka KASHIFAAD: Masar oo hal arrin ku fashilantay kaddibna hanjabaad is muujin ah...
KASHIFAAD: Masar oo hal arrin ku fashilantay kaddibna hanjabaad is muujin ah ku dhaqaaqday!
(Qaahira) 23 Juun 2020 – Diblomaasi Masri ah iyo ilo ku dhow dowladda dalkaasi ayaa sheegaya in aanay Masar ciidamo dhuleed iyo kuwo badeed toona u diri doonin inay xoojiyaan hoggaamiye kooxeedka Khalifa Haftar.
Warkan ayaa imanaya xilli uu MW Masar ee Abdel Fattah al-Sisi uu ku falax gooddiyey inuu faragelin ciidan ku samaynayo dalka Libya kaddib markii ay taangiyo u daabushey xadka ay Libya kala leedahay dhanka galbeedka, sida ku qornayd warqaadka al-Araby al-Jadid.
Ilahan oo ku hadlay shuruud ah inaan la xiganin, ayaa sheegay inay dhici karto in la sameeyo ”holwgallo kooban” oo laga fuliyo bariga Libya si loo helo xakame istaraatiji ah.
“Waxa ugu badan ee ay Masar qaban kartaa waa inay sameeyso weerarro dhanka cirka ah, si loo baajiyo ciidamada soo ruqaansanaya,” ayay yiraahdeen.
Waxay intaa raaciyeen in Masar ay iskeed u doonayso inay meel ku yeelato Libya, kaddib guuldarradii uu Xaftar kala kulmau GNA oo ay turkigu taageeraan, balse uu Siisi og yahay in dagaal furan oo buuxaa aanu marna miiska saarnayn, maadaama aanay Masar dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaanba ka bixi karin qorshe noocaas ah.
Previous articleDHEGEYSO: Sweden oo tijaabinaysa APP bukaannada u turjumaya oo isbitaallada la dhigayo
Next articleGOOGOOSKA: Verona vs SSC Napoli 0-2